Ny fandikan-tenin'i Google eo no ho eo dia manampy ny lisitry ny fiteny tohanana | Vaovao IPhone
Ny fandikan-teny Google eo no eo dia manampy ny lisitry ny fiteny tohana
Ilay mpandika teny Google dia nanjary iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa eran'izao tontolo izao ho an'ireo mila mandika andianteny na teny manokana. Noho ny interface an'ny app, ity fampiharana ity dia natao handika lahatsoratra lava, satria afaka mahita fampiharana be dia be ao amin'ny App Store isika, toy ny mpandika teny, rindranasa ahafahantsika mandika lahatsoratra eo anelanelan'ny fiteny 58 ary hatramin'ny omaly dia azo alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra. Ny fahazoana ny serivisy fandikan-teny Word Lens avy amin'i GoogleTelo taona lasa izay, efa taloha sy aorian'io ho an'ny mpandika teny, satria mamela anay handika lahatsoratra amin'ny alàlan'ny zava-misy marina sy ny fakantsarin'ny fitaovantsika ilay fampiharana.
Fa ny tsara indrindra amin'izany rehetra izany dia ny famelana antsika hanao izany nefa tsy mila manana fidirana amin'ny Internet, izay mahatonga azy io ho fampiharana mety indrindra rehefa manao dia lavitra isika ary manana olana lehibe amin'ny fahatakarana ny fitenin'ny firenena izay tsidihintsika. Fandikana eo noho eo, toa ny niantsoan'ny Google an'ity serivisy fandikan-teny ity tamin'ny alàlan'ny fakantsary vao nahazo fiteny vaovao ho an'ny lisitr'ireo notohanana amin'izao fotoana izao: Japoney, na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy mahay afa-tsy mandika amin'ny teny japoney ho amin'ny anglisy ary ny mifamadika amin'izany.
Amin'izao fotoana izao Ireo mpampiasa miteny espaniola dia mila miandry ny fampifanarahan'ny Japoney amin'ny Espaniôla ary ny mifamadika amin'izany, raha mbola tsy manana hevitra momba ny anglisy isika. Ity fampiasa ity dia efa azo alaina amin'ny alàlan'ny sary nalaina tao amin'ny fitaovantsika ary koa tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra, fa manomboka izao dia afaka manao izany amin'ny fotoana tena izy isika, nefa tsy mila maka ny sary tsirairay tiantsika adika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ny fandikan-teny Google eo no eo dia manampy ny lisitry ny fiteny tohana
Ny lahasa 'Popular Hours' dia tonga amin'ny fampiharana Google Maps ho an'ny iOS
IOS 10.3 Beta ho an'ny daholobe azo alaina izao